Ndabere Ndị Ahịa: Nchịkọta, Atụmatụ, na Nkọwapụta (CRR vs DRR) | Martech Zone
Njide ndị Ahịa: Nchịkọta, Atụmatụ, na Nkọwapụta (CRR vs DRR)
Anyị na-ekekọrịta oke ntakịrị gbasara nnweta mana ezughi oke njigide ndị ahịa. Nnukwu usoro azụmaahịa adịghị mfe dịka ị na-ebugharị ndị ọzọ, ọ bụkwa maka ịkwọ ikike ụzọ. Idebe ndị ahịa na-abụkarị akụkụ dị nta nke ego iji nweta ndị ọhụrụ.
Site n'ọrịa ahụ, ụlọ ọrụ dị iche iche wedara ala ma bụrụ ndị na-eme ihe ike n'inweta ngwaahịa na ọrụ ọhụụ. Ọzọkwa, nzukọ ndị mmadụ na-enwe na nzukọ ahịa na-egbochi atụmatụ nnweta na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Mgbe anyị tụgharịrị gaa nzukọ na ihe omume dị iche iche, ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ikike ịchụpụ ahịa ọhụrụ kpụkọrọ akpụkọ siri ike. Nke a pụtara na iwusi mmekọrịta ike ma ọ bụ ọbụna na-akpali ndị ahịa ugbu a dị oke mkpa iji debe ego na-aga na ụlọ ọrụ ha na-ese.
Ndi ndu n’oru ndi n’etolite etolite etinyere anya na njigide ndi ahia ma oburu na inweta nnweta di ala. M na-ala azụ na-ekwu na ọ bụ ozi ọma… ọ ghọrọ a mgbu doro anya ihe na-akụziri ọtụtụ òtù na ha na-shore elu na ike ha ahịa njigide azum.
Ndị Nchịkọta Ndị Ahịa
Enwere ọtụtụ ụgwọ a na-adịghị ahụ anya nke na-abịa na njigide ndị ahịa dara ogbenye. Nke a bụ ụfọdụ ọnụọgụ nkwụpụta nke ga - eme ka elekwasị anya na njide ndị ahịa:
67% nke ndị ahịa na-alọghachi na-emefukwu ego n’afọ nke atọ ha si n’ahịa zụta karịa ka ọnwa isii mbụ ha nọrọ.
Site na ịbawanye ọnụego njide ndị ahịa gị site na 5%, ụlọ ọrụ nwere ike abawanye uru site na 25 ka 95%.
82% nke ụlọ ọrụ kwenyere na njide ndị ahịa na-efu ihe na-erughị nnweta ndị ahịa.
68% nke ndị ahịa agaghị alaghachi azụ ahịa mgbe ha nwesịrị a ahụmahụ ọjọọ na ha.
62% nke ndị ahịa na-eche ụdị ndị ha kachasị eguzosi ike n'ihe anaghị arụ ọrụ zuru ezu kwụghachi ndị ahịa ụgwọ.
62% nke ndị ahịa US akwagala na akara dị iche na afọ gara aga n'ihi a enweghi ike inweta ahụmịhe.
Na-agụta ọnụego njigide (Ahịa na Dollar)
Ọ bụghị ndị ahịa niile na-emefu otu ego na ụlọ ọrụ gị, yabụ enwere ụzọ abụọ maka ịgbakọ ọnụego njigide:
Ọnụ Ndabere Ndị Ahịa (CRR) - Onu ogugu ndi ahia i debere na onu ogugu i nwere na mbido oge (igaghi aguta ndi ahia ohuru).
Ọnụego njigide Dollar (DRR) - Onu ogugu nke ego i tinyere na ntinye ego i nwere na mbido oge (adighi agu ego ohuru). Otu ụzọ nke ịgbakọ nke a bụ ikewa ndị ahịa gị site na ego ha ga enweta, wee gbakọọ CRR maka ụdị ọ bụla.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-aba nnukwu uru nwere ike ịnwe njigide ndị ahịa dị ala ma elu dollar njigide ka ha na-agbanwe site na obere nkwekọrịta gaa na nnukwu nkwekọrịta. Na mkpokọta, ụlọ ọrụ ahụ dị mma ma baa uru n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị ahịa furu efu.
Ntuziaka kachasị na njide ndị ahịa
Ihe omuma a site na M2 Na-ejide Nkọwa ọnụ ọgụgụ njigide ndị ahịa, ihe kpatara ụlọ ọrụ ji tufuo ndị ahịa, otu esi agbakọ ọnụego njigide ndị ahịa (CRR), olee otú gbakọọ dollar njigide ọnụego (DRR), yana ịkọwapụta ụzọ iji jigide ndị ahịa gị:
Nsogbu - iju ndi ahia anya n’enye onyinye na-atụghị anya ya ma ọ bụ ọbụnadị ederede aka.
Olileanya - ndị ahịa na-emechu ihu na-esitekarị site n’itinye atụmanya na-enweghị isi.
Obi ụtọ - nyochaa isi arụmọrụ egosi na-enye nghọta na afọ ojuju ndị ahịa gị.
nzaghachi - jụọ maka nzaghachi maka otu esi enweta ahụmịhe ndị ahịa gị ma mejuputa usoro ndị ahụ nwere nnukwu mmetụta.
Gwa - na-ekwukarị nkwalite gị yana uru ị na - ewetara ndị ahịa gị n’oge.
Nanị ndị ahịa na-eju afọ agaghị ezuru iji nweta iguzosi ike n'ihe. Kama nke ahụ, ha ga-enwerịrị ọrụ pụrụ iche kwesiri ka ha megharịa azụmahịa na ntụgharị aka ha. Ghọta ihe ndị na-eme ka mgbanwe ndị ahịa a.
Rick Tate, Onye edemede nke The Service Pro: Creatmepụta Mma, Ọsọ ọsọ, na Ahịa Dị Iche Iche
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ Mgbakwunye Amazon m maka akwụkwọ Rick Tate.
Tags: Ugwuekeahụmahụ ahịaezi ndị ahịanjigide ndị ahịaọnụego njigide ndị ahịaobi ụtọ ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaọnụego njigide dollarIkechukwum2 na ejiderenjigidennweta mgbasa oziIhe Mere Ndị Ahịa Ji Hapụ
Mgbasa Ahịa: Atụmatụ isii Nke Na-emeri Obi (na Atụmatụ Ndị Ọzọ!)
Ọgọstụ 29, 2013 na 12:52 ehihie
Ka anyị nyagide!
Ọgọstụ 29, 2013 na 10:56 ehihie
Um. Chaị. 🙂
ntinye akwụkwọ social
Nọvemba 5, 2013 na 3:31 nke ụtụtụ
Kwuonụ nke ọma! Mmekọrịta ndị ahịa na-arụ ọrụ dị mkpa na ntinye aka ndị ahịa na azụmahịa.